Ndingaya njani kwiMowudi emnyama kwi-Instagram yam? ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 326
Ngoku zonke izicelo yeefowuni eziphathwayo kunye neePC banika abasebenzisi babo ukhetho lwemowudi emnyama. Nangona ingezizo zonke izicelo ezikhoyo, uninzi lwabantu sele luyiphumeza. Enye yezicelo esele inale modi kubasebenzisi bayo yi-Instagram.
Ngexesha I-Instagram ithathe ixesha layo ukufaka imowudi emnyama kwinkqubo yayo, kuba ibiyeyokugqibela ukujoyina le mowudi, sele yenze njalo, ukuze abasebenzisi bayo bagcine ibhetri kwaye banakekele amehlo abo xa ufaka isicelo ebusuku, nto leyo eyenza ukuba ibe ngaphezulu kancinci. enomtsalane kubabhalisi bangoku nabanokubakho abatsha kule app.
Uyenza njani imowudi emnyama:
I-Instagram inoyilo olwahlukileyo kwisicelo sayo kwi fowuni.
Xa sele ifakiwe imowudi emnyama kwiifowuni zethu eziphathwayo Ngeteknoloji ye-Android, asiyi kukwazi ukuyikhupha, ngaphandle kokuyikhupha kuyo yonke inkqubo yeselula yethu. Oku kuya kuxhomekeka kwincasa yomntu ngamnye, kuya kubakho abo bakhetha ukuba nemowudi emnyama kwisicelo ngasinye sefowuni yabo.
Asimele silibale ukuba indlela emnyama ye-Instagram yale nkqubo iya kufumaneka ukusuka ukusuka kwi-Android 10, kwaye ngokuqinisekileyo kunye nezixhobo eziphucukileyo zetekhnoloji.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ngena kwisicelo sethu se-Instagram esisuka kwiselfowuni yethu, sisebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Nje ukuba sibekwe kwiprofayile yethu, siya kukhetha ukhetho lweseto lwesicelo, esi sikwindawo ephezulu ngasekunene kwesikrini, eboniswe imivimbo emithathu ethe nkqo.
Nje ukuba ukhetho lubonisiwe, kufuneka ucofe kwi icon yesethingi yesixhobo esiphathwayo, esibekwe emazantsi esikrini embindini wayo. Cofa kwi icon.
Nje ukuba ukhetho loqwalaselo lwesixhobo esiphathwayo lubonisiwe, kufuneka sifumane kwaye sikhethe leyo iboniswe ngegama. "Umxholo", Oku kuya kusiphambukisa kuthotho olutsha lweenketho apho kufuneka sikhethe imowudi emnyama.
Ngale ndlela unokuvula imowudi emnyama kuphela kwisicelo se-Instagram.
Ngoku, ukuba ufuna ukwenza ukusebenza kwemowudi emnyama Kuzo zonke izixhobo zakho kunye nezicelo ozikhuphileyo, kuya kufuneka uye kuseto lwesixhobo kwaye ukhethe imowudi emnyama.
Izibonelelo zemowudi emnyama:
Khathalela ukubona kwethu kwamehlo. Inqanda ukuthinteleka kwe-retina ngokukhawuleza kwaye ke iyasikhusela kwi-astigmatism.
Kuphephe eyestrain. Ukukhanya okumhlophe ngokuthe ngqo kubangela uthotho lweengxaki ezibonakalayo, ezinokuthi ngokuhamba kwexesha zinokubangela iingxaki ezinzima.
Ukuphucula amava omsebenzisi. Okwenza ukuba kube sisicelo esinomtsalane kwezi.
Sebenzisa ibhetri encinci kwiifowuni eziphathwayo.
1 Uyenza njani imowudi emnyama:
2 Kwimeko ye-Android:
3 Kubalulekile ukuqaphela:
4 Isebenza njani:
5 Izibonelelo zemowudi emnyama: